जग्गा बेचेर फ’रार श्रीमान २ महिनापछि काँडाघारीबाट समातिए (भिडियो हेर्नुहोस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > जग्गा बेचेर फ’रार श्रीमान २ महिनापछि काँडाघारीबाट समातिए (भिडियो हेर्नुहोस्)
सम्झना तामाङ काठमाडौ कुमार कार्की करिव दुई महिना अघि काठमाडौकि सम्झना तामाङ श्रीमान हराएको भम्दै मिडियामा आएकी थिइन । करिव ४ वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारिका लागि मलेसिया गएका थिए श्रीमान कुमार कार्की ।
तर मलेसियाबाट छुट्टिमा फर्किए पछि भने श्रीमानको ब्याबहक्र परिवर्तन भएको उनले बताएकी थिइन । पहिले पनि बिबाह गरेको र आफुसगँ कुमारको बिहे हुनु अघि उनकी श्रीमती अरुसगैँ गएको भन्ने आफुले थाहा पाएको उनको भनाई थियो । आफुले बिबाह गरे पछि श्रीमन बिदेश गएर छुट्टिमा फर्किएको उनले बताएकी थिइन ।
फर्किए पछि भने सधै फोनमा मात्र बोली रहने गरेको उनको भनाई थियो । श्रीमान बिदेश बाट नै आफुसगँ बाट भाग्ने योजना बनाएर आएकोले घर आउने बित्तिकै जग्गाहरु पनि हतार हतार गरि बेचेर पुन बिदेश जाने भनी हिडेकी उनले बताएकी थिइन । त्यस पछि भने कुनै सम्पर्कमा नभएको उनले बताएकी थिइन । दुई महिना अघि आफू आफ्नो आफन्त, प्रहरी लगायत सबै ठाउँ खोजी गर्दा पनि श्रीमान नभेटिएको भन्दै काठमाडौबाट चितवनमा पत्रकार सन्तोष देउजा समक्ष पुगेकी थिइन ।
त्यस पछि उनको भिडियो बाहिरिए सगैँ मिडिया मार्फत उनका श्रीमान कुमार कार्किको खोजी सुरु गरिएको थियो । खोजी हुँदै गर्दा कुमार कार्की काठमाडौकै काडाघारिमा भेटिएका थिए । कुमार काडाघारिमा छन भन्ने जानकारी पाए पछि सम्झना प्रहरी र आफन्त सहित सो स्थानमा पुगेकी थिइन । श्रीमान कुमार अर्कै केटि लिएर बसेको भन्ने आफुहरुले थाहा पाए पछि आफुहरु दिउँसो नगएर राती उनिहरु बसेको स्थानमा गएको उनले बताइन ।
दिउँसो दुबै जना भेटिदैनन भनेर आफुहरु बेलुका गएको उनले बताइन । आफुहरु बेलुका जादाँ उनिहरु दुबैजनालाई सगैँ भेटेको सम्झनाले बताईन । पहिले आफू मात्र भित्र जादाँ श्रीमान केही आक्रोशित बनेको पनि उनले बताईन । तर श्रीमानले नै आफुले गल्ती गरेको भन्दै स्विकार गरेको सम्झनाले बताईन । श्रीमानले त्यो बेला तैले पनि गल्ती गरेको भन्दै केही आफुलाई पनि दोष देखाएको उनले बताईन ।
तर आफुले गल्ती गरेको भए घरमै बसेर सल्लाह गर्नु पर्नेमा किन यसरी बिचल्ली बनाएर थाहै नदिइ हिड्नु, यसरी हिड्दा सबै राम्रो भयो र ? भन्दा उहाले गल्ती भयो भनी स्विकारेको सम्झनाको भनाई छ । पछि उनिहरी दुबैलाई प्रहरीले लिएर गएको उनको भनाई छ । २२ वर्ष कि ती महिलाले आफुलाई कुमारले आफू डिभोर्स भएर बसेको भनि भनेकोले गर्दा आफुले पनि बिबाह गरेको बताएको सम्झनाको भनाई छ ।
अहिले भने श्रीमान आफुसगँ ल्याएको र ती महिलालाई सोही कोठामा राखिएको उनले बताईन । अब ती महिलाको बारेमा के गर्ने भन्ने उस्को आफन्तहरु आए पछि सल्लाह गर्ने सहमती भएको सम्झनाको भनाई छ । आफुलाई श्रीमान खोजी गरिदिन सहयोग गरेकोमा मिडियालाई धन्यवाद दिइन ।
ख‍‍ोपकै कारण हल्का रुघाखोकी लागेपछि छिट्टै सुतेकी थिइन् कल्पना, तर बिहान पापी दैवले लगिसकेछ!
अमेरिकामा दुःखद कार दुर्घटनाः नेपाली मूलका आमाछोरीको ज्यान गएपछि…